Ọbụna nke ka njọ, ị nwere ike ghara ịchọpụta na a na-eburu ozi ịntanetị gị gaa na junkuru belụsọ ma ị na-eji ihe igbe nlekota igbe. Nkwado m maka nke a bụ ndị mmekọ anyị na 250ok, onye m na-ejikwa nyochaa igbe ntinye m. Ha na-eme nke a site na ịnye ndepụta mkpụrụ ma nyochaa igbe igbe ndị ahụ, wee kọọrọ gị ma email gị ọ mere ka ọ bụrụ onye na-eweta ọrụ Internetntanetị ọ bụla.
Gị onwe ngalaba na-enyere ndị ISP aka inyocha yana yana ịkparịta ụka nke ọma na onye debanyere aha gị site na nzaghachi nzaghachi. N'ime ngwugwu nyocha nke ziri ozi, ị ga-edozi DNS gị iji mee ka ụfọdụ subdomains ole na ole maka izipu na nzaghachi, yana igodo nyocha. Na subdomain mbon, a na-akpọ ndị nnọchi anya mpaghara, ị na-ebufe akụkụ nke ngalaba gị dị na ahịa Cloud dị ka akụkụ nke nhazi ngalaba gị. Ahịa Cloud na-eji subdomain akọwapụtara maka ihe omume kwesịrị ekwesị.
Gha acho inweta akwukwo SSL nke ahia gi maka ahia ahia ahia. Akaụntụ ahazi na SAP nke na-ejighi asambodo SSL na-egosi Ahịa Cloud Cloud dị nchebe na njirimara nke ihe oyiyi na Nrụpụta Afọ. Mgbe ị gbakwunye onyinyo ahụ na email, URL na nchịkọta akụkọ na-egosi nhazi ngalaba ntọala gị na SAP. Nchịkọta njikọ na ibe ihe oyiyi oyiyi na-edepụta ngalaba omenala maka iji na ozi ịntanetị, ibe ọdịda, na ihe nchọgharị.